၁။ ဝါယာကြိုးကွက်၏ရှင်းလင်းသောပန်းတိုင်တစ်ခုထားပါ။ ၂။ ဘယ်ဝါယာကြိုးအမျိုးအစားကိုသင်ပိုနှစ်သက်ပါသလဲ Black Annealed ကြိုး - ပုံသဏ္easyာန်၊ တင်းမာမှုပြင်းထန်မှု၊ သံချေးရလွယ်ကူခြင်း။ ပူပြင်းသောသွပ်အကာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဝါယာကြိုး - တောက်ပ။ လှပသော၊ ချေးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ Electro-galvanized -...
ကြက်သားဝါယာကြိုးအတွက်မတူညီသောအသုံးပြုမှုများစွာရှိသည်။ ဒါဟာသင်မျှော်လင့်ထားတာထက်အများကြီးစွယ်စုံရသည်။ အထူးခြားဆုံးသောအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာဆhe္ဌဂံပိုက်ကွန်ကိုပန်းပုလက်ရာများအဖြစ်ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျမှပန်းပုဆရာ Ivan Lovatt သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအနုပညာလက်ရာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ သွပ်ရည်ပူကြက်သားကိုသုံးခြင်း ...
GALVANIZED CHAIN ​​LINK FENCES အသုံးပြုမှုအနည်းငယ်
ခြံစည်းရိုး၏အနှစ်သာရအရှိဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာသွပ်ရည်ပူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံချည်မျှင်ကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်မှုကိုအကောင်းဆုံးခြံစည်းရိုးစနစ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဤခြံစည်းရိုးများသည်သွပ်သွင်းထားသောဝါယာကြိုးများနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ခြံစည်းရိုးအငြင်းအခုံဖြေရှင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူများသည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဟာက ...
121ST Canton Fair နှင့်ကြိုဆိုပါသည်
ကွမ်ကျိုး၌Importပြီလ ၁၅ ရက်မှ19ပြီ ၁၉ ရက်အထိတရုတ်နိုင်ငံ၏တင်သွင်းမှုနှင့်ပို့ကုန်ပြပွဲ (Canton Fair) ကိုတက်ရောက်မည်။ လာမယ့်ပြပွဲမှာငါတို့တဲ (15.4C24) ကိုလာလည်ဖို့သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရှေ့မှောက်တွင်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်! ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်စက်စက်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကို ...
ချစ်ခင်ရပါသောစားသုံးသူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၈ INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KOLN (မတ်လ ၄ ရက်မှမတ်လ ၇ ရက်အထိ) ပြပွဲတွင်တက်ရောက်မည်။ လာမည့်ပြပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန်းမ (ခန်းမ ၃၁၊ D-081) သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ရှေ့မှောက်တွင်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်! ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်စက်စက်တီထွင်ထားသောအရည်အသွေးများကိုကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာမည်။